Saturday May 12, 2018 - 10:32:33 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta la horgeynaya sharciga Shirkadaha dalka, kaasoo ka mid ahaa hindise sharciyeedyada ay Xukuumadda u soo gudbisay Baarlamaanka.
Sharciga Shirkaddaha ayaa ka mid ah sharciga ugu saameynta badan ee dalka, kaasoo haddii la dhaqan geliyo wax badan ka bedelaya hab dhaqanada shirkadaha ka howl gala dalka, kuwaasoo aanay bixin xuquuqdii ku waajibtay iyo canshuurta.
Xogheynta Golaha Shacabka ayaa ajandaha koowaad ee kulanka maanta ku daray sharciga Shirkadaha (Company Law), waxaana la filayaa in dooda hindise sharciyeedkan uu qaato maalmo, isla markaana ugu dambeyn la ansixiyo.
Guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Maxamed Mursal oo khamiistii la caleema saaray ayaa kulankiisa labaad maanta shir guddoomin doonoa.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa waxaa hor-yaala howlo adag oo ay ugu muhiimsan tahay Hindise sharciyeedyo fara badan oo ay Xukuumadda u soo gudbisay, waxaana ka mid ah hindise sharciyeedyo illaa baarlamaankii 9aad yaalay.